Vexel weputara UltraCam Osprey 4.1 - Geofumadas
Julaị, 2020 cadastre, Geospatial - GIS, GPS / Equipment, Engineering, innovations, ọtụtụ
Onyinye Vexcel na-ekwupụta mwepụta nke ọgbọ ọzọ UltraCam Osprey 4.1, igwefoto igwefoto vidiyo nke ukwuu na-emepe emepe maka eserese foto foto net (PAN, RGB na NIR) na onyonyo oblique (RGB). Mmelite ugboro ugboro maka crisp, mkpọtụ na nkwupụta dijitalụ nke ụwa dị oke mkpa maka atụmatụ obodo. Na-enyere arụmọrụ nnakọta ụgbọ elu a na-enwetụbeghị ụdị ya na ogo rediometric na geometric dị elu, UltraCam Osprey 4.1 na-esetịpụ ụkpụrụ ọhụụ na nkewa obodo na 3D ịme ngosi uwe obodo.
Na-eduzi ọgbọ nke anọ nke UltraCam sensọ imaging sensọ, Usoro a na - ejikọ anya m, ndị na - ahụ maka ọdịnala na - ahụ maka ngwa ahịa, na - egosipụta ihe ngosipụta zuru oke, doo anya na oke ike. . Usoro ahụ na-ebuputa ụgbọ elu na ọkwa ọhụụ, na-anakọta 1.1 Gigapixels ọ bụla 0.7 sekọnd. Ndị ahịa nwere ike ịgba ọsọ ọsọ, kpuchie mpaghara ndị ọzọ, wee hụ nkọwa ndị ọzọ.
Usoro ohuru maka mmeghari ohuru ada ada ada emeghari ihe (AMC) kwusi ihe onyonyo na agaghari ma megharia onyonyo di iche-iche n’ime onyogho di iche-iche iji meputa onyonyo nke puru iche.
Ego ahia nke UltraCam Osprey 4.1 bu n’uche n’isi 2021.
Na mgbakwunye na usoro ọnụọgụ ọhụụ - UltraCam Osprey 4.1 bụ igwefoto ọgbọ nke anọ na ụdị nke mbụ ya - ọgbọ ọhụrụ a na-ewebata ọtụtụ mmelite njiri iji mee ka ọ dịkwuo mfe iji ya. N'ime ihe ndị ọzọ: isi igwefoto belatara na-ebuputa nhọrọ nke ụgbọ elu na ụgbọ elu pere mpe na mpaghara nlele kachasị anya na-enye ohere maka nrụnye dị mfe n'enweghị nkwalite igwefoto. Ndị ahịa nwere ohere dị mfe na IMU na akụrụngwa UltraNav, ịgbanwe UltraNav ma ọ bụ usoro njikwa ụgbọ elu ọ bụla na saịtị na-enweghị mkpa maka ụgwọ ọzọ mgbe ewepụsịrị IMU.
“Site na UltraCam Osprey 4.1 ị na-enweta kamera abụọ n'otu ụlọ. Usoro a gboo mkpa di iche-iche sitere na nkewa nke obodo rue na iji ngwa nke usoro ihe omume otu ụgbọ elu, ”Alexander Wiechert, Onye isi Vexcel Imaging kwuru. "N'otu oge ahụ, anyị abawanyela ụzọ nadir ụkwụ n'ihe karịrị pacenti iri abụọ gafere usoro ụgbọ elu iji mepụta arụmọrụ nnakọta ụgbọ elu nke na-eme naanị site na nnukwu igwefoto usoro."
Ihe onyonyo pAN nke 20.544 x 14.016 pikselụ (nadir)
14,176 x 10,592 pikselụ ụcha oyiyi ụcha (oblique)
Ihe mmetụta sensọ CMOS
Mkpesa Motion Di elu (AMC)
Mbido 1 kwa sekọnd 0.7
120mm lens system (usoro RGB Bayer)
Previous Post«Previous Ihe ozo ohuru nke usoro Bentley Institute: N'ime MicroStation CONNECT Edition
Next Post Geopois.com - Kedu ihe ọ bụ?Next »